Zanak’i Fianarantsoa : Mitaky ny famoahana an’i Claudine Razaimamonjy -
AccueilSongandinaZanak’i Fianarantsoa : Mitaky ny famoahana an’i Claudine Razaimamonjy
Zanak’i Fianarantsoa : Mitaky ny famoahana an’i Claudine Razaimamonjy
Noho ny hetsika fitakiana izay mivaona sy mibolila sy tsy mandeha araka ny tokony ho izy tanterahin’ ny solombavambahoakan’ ny fanovana, dia lasa samy manana ny fitakiana ny rehetra amin’ izao fotoana izao ka tonga amin’ ny resaka fiaviana aza. Mifangaro mantsy ny politika sy ny fiaviana amin’ izao fotoana izao, toa ny etsy amin’ ny 13 mai, izay lasa misy fitakiana ny famoahana ny kolonely Lylyson sy Alain Ramaroson fa kosa tsy nisy ny fangatahana ny famoahana an’i Claudine Razaimamonjy. Manoloana izany tsy fifandanjana izany dia lasa misy ny fanararaotana amin’ny hetsika maro. Ka noho io fitakiana tetsy amin’ ny 13 mai io izay misy fanavahana, dia nanao ny azy manokana ny zanak’i Fianarantsoa. Noho izany dia vahoaka an’aliny maro no niray feo nandritra ny hetsika firaisankina zanaky ny faritanin’i Fianarantsoa ny sabotsy lasa teo tao an-tampon-tanànan’i Fianarantsoa teo amin’ ny gara Ampasambazaha nandritra ny fifampiarahabana noho ny taona vaovao, no nitaky ny famoahana ny zanak’izy ireo, Claudine Razaimamonjy, izay mbola voatazona any am-ponja amin’ izao fotoana izao. Nambaran’ ireo solontena isaka ny faritra anatin’ ny faritany, ary anisan’izany ny avy ao fito vinany tamin’ ny alalan-dRakotonandrasana Samuel fa “mpandraharaha tahaka ny mpandraharaha rehetra, Claudine Razaimamonjy manao ny asa soa amin’izay tandrify azy izy, ary manana ihany koa ny fomba fanao politikany. Nahoana izy no gadraina, fa izay avy ao amin’ ny faritra Vatovavy fito vinany dia mitaky ny famohana io ray aman-dreninay io” hoy hatrany ny solontenan’i faritra Vatovavy fito vinany raha nandray fitenenana tamin’ ny lanonambe. Ho an’ ny solontenan’ ny faritra Atsimo Andrefana kosa dia nambaran’izy ireo tamin’ ny alalan’ Atoa Clement fa “ tsy ialan’ olomanga ny faritanin’ i Fianarantsoa hatrizay, ary tazana izany nanomboka tamin’ ny repoblika voalohany hatramin’ izao repoblika fahefatra izao, noho izany dia hanambatra ny hery isika hiaraka hitaky ny famoahana ny ray aman-drenintsika. Ka ho anay, tsotra ny teninay ampy izay, avohay izy” hoy hatrany ny solontenan’ ny faritra Atsimo Andrefana.
“Claudine Razaimamonjy anay izay, avoahay ” io no nanakoako sy tazana teny amin’ ny vavan’ny zanaky ny faritr’i Fianarantsoa miray hina nandritra ny hetsika izay notontosaina ny sabotsy teo, manginy fotsiny ny fitondran’ ny isam-batan’olona ny sarin’ ity ray aman-drenin’ izy ireo ity. Tsy izay ihany anefa fa teo ihany koa ny filanjana sora-baventy mitaky ny famoahana an’i Claudine Razaimamonjy, izay fantatra tokoa tamin’io fotoana io fa mamim-bahoaka tokoa any amin’ iny faritr’i Fianarantsoa iny. Ny hetsika moa dia notronin’ireo olomboafidy tany an-toerana sy ireo olona ambony manan-kaja, ankoatra izay dia teo ihany koa ny fanatrehana sy fandraisam-pitenenana izay notanterahin’ ireo olobe avy any an-toerana dia ny Ampanjaka izany. Marihina fa ity hetsika firaisankinan’ny zanaky ny faritanin’i Fianarantsoa ity dia tohin’ ny hetsika izay efa notanterahina teto an-drenivohitra ihany izay notontosaina teny amin’ ny A/C Palace. Marihana moa fa ny olobe sy ampanjaka tao Fianarantsoa miampy ny zanaky ny faritra no nikarakara ny hetsika ny sabotsy lasa teo. Ankoatra izany dia fantatra ihany koa fa anisan’ny laharam-pahamehan’ny zanak’i Fianarantsoa amin’ izao fotoana izao ny fitakiana ny famoahana ny zanak’izy ireo na ihany koa fahazoana fahafahana vonjy maika, araka ny kabary izay nifandimbiasana. Namaranan’izy ireo ny resaka dia ny nanambaran’ izy ireo fa tsy olonolom-poana akory fa kosa olona tonga saina mandray andraikitra ny zanak’izy ireo, dia Claudine Razaimamonjy izany.